सौन्दर्य प्रशाधनले महिलाको स्वास्थ्यमा पुर्याउने समस्या यस्ता छन् « Nepal Bahas
सौन्दर्य प्रशाधनले महिलाको स्वास्थ्यमा पुर्याउने समस्या यस्ता छन्
श्रृङ्गारका प्रसाधनले अनुहारमा घातक पहिचान छोड्ने हुनाले श्रृङ्गारको बानी भइसकेका महिलाको अनुहार श्रृङ्गार नगरेको अवस्थामा आकर्षणविहिन हुन्छ
प्रकाशित मिति : २० पुष २०७८, मंगलवार १२:२०
♦डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट
पूर्व महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
खासगरी महिला वर्गलाई लक्षित गरेर बजारमा अनेक किसिमका श्रृङ्गार प्रसाधनहरूको बिक्री भइरहेको हुन्छ । खुला सडकमा पनि व्यापारीहरू श्रृङ्गारका सामान बेच्न बसिरहेका हुन्छन् । के कस्ता श्रृङ्गारका प्रसाधन उपभोग गर्नु उचित वा अनुचित छ भन्नेतिर यस आलेखको उद्देश्य होइन । तर त्यस्ता प्रसाधनमा केकस्ता हानीकारक तत्व रहेका हुनसक्छन् भन्ने प्रश्नमा पाठकलाई सचेत गराउनु यस पंक्तिकारको उद्देश्य हो । त्यसैले अनुसन्धाताका प्रमाणसिद्ध तथ्यलाई यहाँ समेटिएको छ ।
गुणस्तरयुक्त श्रृङ्गारका प्रसाधन उपयोग गर्दैमा यहाँ भनिएका घातक असर देखा परिहाल्ने चाहिँ होइन । सम्भावना त रहन्छ नै । यसै सम्झौँ, श्रृङ्गारको बानी भइसकेकी महिलाले श्रृङ्गार गर्दाभन्दा नगरेको अवस्थामा उनको अनुहार नकारात्मक रुपमा फरक देखिन्छ। किन ? श्रृङ्गारका प्रसाधनले अनुहारमा आफ्नो घातक पहिचान छोडिसकेको हुन्छ । गुणस्तरीय र हानीरहित यस्ता सामग्रीहरू धेरै महँगा हुन्छन् । त्यसैले जोसुकैले उपयोग गर्न सक्दैनन् ।
एउटा अमेरिकी अनुसन्धानले बताएको छ, विश्वभरि उत्पादन भइरहेका बिभिन्न श्रृङ्गारका सामानमा विभिन्न ८२ हजार किसिममध्येका तत्वहरू मिलाइन्छ । यसमध्ये १० हजार ५०० जति उत्पादनहरूमा औद्योगिक रसायन उपयोग भएको हुन्छ । यसको अर्थ करिब आठमध्ये एकमा औद्योगिक रसायनको उपयोग हुनेगरेको छ, जसबाट छाला, आँखा, ओठ, स्वासप्रश्वासलगायत अन्य अंग हुँदै यस्ता घातकतत्वको असर शरीरभित्र परिसकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० को शुरुदेखि आजसम्मको अध्ययन र रेकर्डबाट अनुसन्धाताहरूले यो तथ्य बाहिर ल्याए कि यस अवधिमा हजारौँ शिशुहरूले ‘टाल्क’ पाउडर सुँघेको कारणले ज्यान गुमाए वा बिमारी भए ।
टाल्क पाउडर खरीढुङ्गालाई पिसेर औद्योगिक प्रक्रिया पूरा गरेर र बास्ना राखिदिएर बनाएको वस्तु हो । यसमा रहेका घातक असरले अवोध शिशुलाई असर पुर्याउने नै हुन्छ । यसको घातक असरले स्वास–प्रश्वास तथा फोक्सोमा समस्या र यहाँसम्म कि महिलाहरूलाई पाठेघरको क्यान्सरसमेत हुनसक्छ । प्लास्टिक, पेट्रोलियम, बेट्री, किटाणुनाशक विष र कस्मेटिक प्रसाधनमा पाइने शिशा (लेड), अनुसन्धान गरिएका ६१ प्रतिशत नमूना लिपस्टिकहरूमा पनि पाइएको बताउँछन् अनुसन्धाताहरू ।
नेपालमा श्रृङ्गार प्रसाधनको गुण नियन्त्रणको कुनै संयन्त्र छैन । न त यसका घातक असरको क्षतिपूर्ति कानुन, सुरक्षा मापदण्ड (सेफ्टी स्टान्डर्ड) नै छ । जनचेतना पनि यथेष्ट स्तरमा छैन । वस्तुको लेबलमा उल्लेखित घटक–द्रब्य (इन्गे्रडिएन्ट्स्) हेर्ने प्रायः चलन छैन । महँगो दाम, ब्रान्ड र सुगन्धका आधारमा त्यसको गुणस्तर ठम्याउने उपभोक्ताको स्वभाव हुन्छ । वस्तुको उपयोगिता र मूल्याङ्कन गर्ने यो सही तरिका होइन ।
आजकाल धेरै चीज नक्कली हुने र बजार नियन्त्रण नभएकोले उपभोक्ताहरू ठगिनुका साथै स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने खतरामा हुन्छन् । गुणस्तरीय श्रृङ्गारका प्रसाधन पनि स्वास्थ्यको ख्याल नराखी जथाभावी लगाउनु हुँदैन । यस्ता सामग्री उपयोग गर्नबाट निषेध गर्न होइन, होशियारी अपनाउन यहाँ केही त्यस्ता तत्वहरू दिइएको छ, जो श्रृङ्गार प्रसाधनमा मिलाइएको हुनसक्छ, र त्यसका घातक असरबारे सचेत गराउने प्रयास गरिएको छ ।
‘डिब्युटाइल प्याथलेट’ (डीबीपी):– कपालमा छर्किने (हेयरस्प्रे) र नङ्सम्बन्धी उत्पादनमा हालिने यो तत्व हार्मोनको क्रियाका लागि असरदार हुन्छ । नङ्पालिस र हेयरस्पे्रमा सुगन्धको नाममा लुकाएर मिसाइन्छ, जसले प्रजननशीलतामा पनि असर पुर्याउँछ । ‘बुटिलेटेड हाइड्रोजाइनिसोल’ (बीएच्ए) — विभिन्न कस्मेटिक्स्, लिपस्टिक, म्वाइश्चराइजर आदिमा र डिब्बाबन्द खाद्य सामग्रीको परीक्षक (प्रिजर्भेटिभ) को रुपमा समेत उपयोग गरिने यो तत्वले छालामा एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्नसक्छ । साथै यो क्यान्सरको कारकका रुपमा पनि मानिन्छ ।
‘कोल टार डाइज’:– कपाल रंगाउने रंग प्रशाधनका रुपमा उपभोग गरिने यो वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ र विभिन्न रसायनहरूको मिश्रणबाट बनाइन्छ । क्यान्सर र दिमागलाई असर गर्ने गहन धातुका रुपमा यसलाई चिनिन्छ । अत्तर वा सिन्थेटिक परफ्युम— अत्तर वा सुगन्ध, कोलोन, गन्धनाशक (डियोडरेन्ट), तयार गर्न ३ हजार विभिन्न किसिमका रसायनहरूको प्रयोग हुन्छ । हामीलाई ती सुगन्ध त मन पर्छ, तर यस्ता चिजको अत्यधिक सेवनले गर्दा दम, स्वासप्रश्वास, एलर्जी, स्नायविक बिमारी (न्युरोटक्सिसिटी), घाँटीको समस्या, टाउको दुख्ने (माइग्रेन पेन) र यहाँसम्म कि क्यान्सरको खतरा पनि हुनसक्छ भन्ने चेतना कमै मात्र हुनसक्छ ।
पोलिथाईलिन ग्लाइकोल्स् (पीईजी):— कन्डिसनर्स्, म्वाइश्चराईजर, डियोडोरेन्ट जस्ता प्रशाधनमा राखिएको यो तत्व पेट्रोलियम तत्वमा आधारित हुन्छ, जसले एकआपसमा जोड्ने, नरम तथा बाक्लो गराउने, ओसिलो बनाइराख्ने कार्यको लागि कस्मेटिक्स् क्रिमको रुपमा उपयोग गरिन्छ । औषधीका रुपमा यसको उपयोग जुलाब (ल्याक्सेटिभ) को प्रयोजनमा लिइन्छ । यसले स्नायविक प्रणालीमा असर गर्नसक्छ ।
पेट्रोलियम : ‘पृथ्वीको तेल’ का रुपमा उत्पादन हुने पेट्रोलियम पदार्थसँगै अन्य धेरै चिज उत्पादन हुन्छ । कपाल चम्किलो बनाउनेसम्बन्धी प्रसाधन, शिशुका तेल, साबुन, ओठको मलम (चापस्टिक आदि), लिपस्टिक, भ्यासलिन लगायत छालाको हेरचाहका सामान पेट्रोलियम तत्वबाटै बन्छन् । तर यसबाट हुने विकृति वा नकारात्मक असरले क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ । यसका प्रशाधन छालामा लगाउँदा पसिना लगायत बिकार बाहिर निस्कने बाटो छेकिने र अक्सिजन छालाबाट शरीरमा प्रवेश गर्न नपाउने हुनाले यसको उपयोगमा आदत बस्दा कलेजो (लिभर) को काममा असर पुर्याउने हुन्छ ।
सिलोजेन्स्: म्वाइश्चराइजर, कपालका प्रसाधन र अन्य मेक–अपका सामानमा मिसाइएको हुन्छ । यसको दुरुपयोगले हर्मोनको कार्यमा असर पुर्याउनुका साथै लिभर खराब गराइदिन सक्छ । त्यसैगरी ‘सोडियम लारील सल्फेट’ (एस्एल्एस) फिँज आउने सामग्री जस्तै डिटर्जेन्ट, श्याम्पो, क्लिन्सर, फिँजमा नुहाउने (बबल बाथ) बनाइन्छ । यसको अत्यधिकता वा नकारात्मक उपपयोगले लिभरमा क्षति, छाला र आँखामा चर्चराहट र क्यान्सरसम्मको सम्भावना ल्याउँछ ।
ट्रिक्लसनः विशेषगरी प्रतिजैविकीय (एन्टी ब्याक्टेरियल) उत्पादनका सामान– टुथपेस्ट, डियोडरेन्ट, क्लिन्सर, हात सफा गर्ने साधन, साबुन आदिमा राखिएको हुन्छ । यसको दुरुपयोगले हार्मोनको काममा असर पुर्याउँछ । यसैगरी प्रायः डियोडरेन्टमा हालिने ‘अल्मुनियम’ खनिज तत्व अल्जाइमर्स्, दिमागका रोगको जोखिम र स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित छ । ‘मक्र्युरी’ (पारो) हालिएका प्रसाधनको दुरुपयोगले मिर्गौला खराबी, स्नायु प्रणालीमा समस्या, गर्भस्थ शिशु वा बालबालिकाको दिमागको विकासमा अवरोध हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । आई–श्याडो (आँखाको प्रसाधन) मा ‘निकेल’ तत्व पाइएको र यसले एलर्जी गराएको तथ्य अनुसन्धाताहरूले प्रकाशमा ल्याएका छन् ।
सौन्दर्य प्रशाधनका पारखीले केचाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने प्रशस्त पानी पिउने, हरियो सागसब्जी, फलफूल पर्याप्तमात्रामा खाने, लसुन, कागती, अमलाजस्ता वस्तुको नियमित रुपमा उचित उपभोग गर्ने, खाने, काम गर्ने, सुत्ने, उठ्ने, मनोरन्जन गर्ने कार्य नियमित र निश्चित समयमा गर्ने बानी बसालियो भने शरीरको सौन्दर्य धेरै राम्रो भएर आउँछ । व्यायाम गर्ने, पसिना निकाल्ने, निद्रा पुर्याउने, सहजै पच्ने खालको भोजन गर्ने, कब्जियत हुन नदिने जस्ता आनीबानीले मानिसको सौन्दर्य प्राकृतिक रुपले बढेर आउँछ । वनस्पतिजन्य साधनलाई श्रृङ्गारको प्रयोजनमा अपनाउन सकिने पनि प्रशस्त सम्भावना छ, जसको हानी नगण्य हुन्छ ।
रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी दिनहुँ बढ्दै
के तपाई खुशी हुन चाहानु हुन्छ ? यस्ता छन्, खुशी हुने ५ कुरा
अब नर्भिकमा पनि कोभिड–१९ खोपकेन्द्र